Socks namboarina | Socks namboarina manokana｜Famolavolana socks tokana tokana - Ubuy
Ahoana no hanafatra ba kiraro mahazatra
Tsy indostria sarotra ho an'ny mpanamboatra ny famokarana ba kiraro amin'ny alàlan'ny famolavolana ba kiraro namboarinao, na dia misy dingana maro aza izany mba hamitana ny famokarana ny ba kiraro manontolo. Toy ny fanaovana sock design, fifantenana sock kofehy, sock knitting, sublimation fanontam-pirinty, amboradara, toe fifandraisana, mamorona, kalitao fisafoana, fonosana, fitaterana, fanafarana, fanondranana, tarif, sns.
Ubuy dia manome serivisy famolavolana sy fanamboarana ba kiraro tokana ho an'ireo izay mila ba kiraro namboarina manokana. Ny hany tokony hataonao dia ny mandefa ny endrikao na manazava ny zavatra ilainao, ary mandoa, dia hamita ny asa rehetra amin'ny maha-mpanao ba kiraro matihanina.
Ny fanamboarana ba kiraro mahazatra dia mety ho tsotra toy ireto dingana 7 manaraka ireto:
1. Apetraho Aminay ny hafatrao
Azonao atao ny mamela ny anaranao, ny nomeraon-telefaona, ny mailaka hifandraisana, ny anaran'ny orinasa, ary ny fanontanianao sy ny zavatra ilainao, hamaly anao izahay ao anatin'ny 24 ora.
2. Socks Designs
Alefaso amin'ny endrika ba kiraronao ary hamafiso ny antsipirihan'ny endrikao, toy ny famoronana, habe, hateviny, fomba, sns.
1) Alefaso amin'ny endrika AI ny endrika ba kiraro vitanao raha azo atao na azonao atao ny misafidy izay endrika tianao amin'ny pejin'ny vokatray.
2) Ny firafitry ny ba kirarontsika dia 80% landihazo, 17% nylon ary 3% spandex, misy fitaovana hafa foana.
3) Afaka manao habe iray mifanaraka indrindra izahay ary afaka manao habe hafa koa izahay raha lazainao aminay ny refy tianao.
3. Mandray Socks Santionany
Ny socks santionany dia hatao ao anatin'ny 7-10 andro ary alefa any aminao ho fankatoavana alohan'ny famokarana betsaka.
Momba ny socks santionany, afaka manao santionany maimaim-poana izahay raha mametraka ny baiko be dia be raha tsy izany dia mila mandoa anao amin'ny santionany izahay fa haverinay aminao ny sarany rehefa mametraka ny baiko betsaka ianao.
Na izany na tsy izany, dia hanao santionany mifototra amin'ny famolavolanao izahay ary handefa azy ireo ho anao ho an'ny fankatoavana ny famokarana betsaka. Ary hanova tsy tapaka ny santionany izahay mandra-pahafa-po anao amin'izany.
4. Mandoa petra-bola
Mandoa vola 30% mialoha alohan'ny famokarana betsaka.
Mba hahazoana antoka fa afaka mandeha tsy tapaka ny famokarana ba kiraro, dia mila mandoa ny mpanjifantsika ny tahiry alohan'ny famokarana isika.
Ho an'ny baiko kely dia mila mandoa petra-bola 100% sy 30% ho an'ny baiko lehibe.
5. Famokarana betsaka
Ny famokarana betsaka ihany no azo atomboka aorian'ny santionany ankatoavina amin'ny farany. Ny fotoana famokarana betsaka dia tokony ho 35-45 andro aorian'ny fankatoavana ny santionany.
6. Aloavy ny mizana
Ny tambiny dia tokony aloa aorian'ny famokarana betsaka ary alohan'ny handefasana azy ireo.
Hatramin'izao, ny asa famokarana rehetra dia vita amin'ity tsingerin'ny famokarana ba kiraro ity ary vonona ny handefa ny kiraronao.
7. Fanaterana maneran-tany
Ny ba kiraro dia halefa avy hatrany aorian'ny nandoavanao ny fifandanjana.
1) fandefasana an-dranomasina: Ny fandefasana an-dranomasina no mora indrindra nefa koa ny fomba miadana indrindra amin'ny fanaterana manerantany, izany no safidy tsara indrindra ho an'ny filaminana lehibe.
2) Fandefasana fiaran-dalamby: Mora ny fandefasana lamasinina ary tsy misy fampisehoana toy izany, fa mety amin'ny firenena maromaro fandefasana avy any Shina ihany.
3) Fandefasana rivotra: Ny fandefasana rivotra no fomba haingana sy lafo indrindra, ity no safidy tsara indrindra ho an'ny santionany sy baiko kely fotsiny.